Fanomezana sy fidiram-bola ao amin'ny DesdeLinux. Manolotra angona misimisy kokoa izahay | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Avy amin'ny Linux
Andro vitsy lasa izay ny mpiara-miasa amiko KZKG ^ Gaara -bahoaka lahatsoratra iray izay niresahanay ny mety hanampiana dokam-barotra amin'ny DesdeLinux ho fomba iray ahazoana tombony ary hahafahana mandoa ny Hosting sy ny serivisy atolotray, fa tsy mangataka fanomezana.
Nisy namako iray namorona ny kaonty ho anay AdSense ary nankatoavin'i Google. Taty aoriana dia namboariny izany, nampidirinay ny sora-baventy tao amin'ny DesdeLinux ary tsy naharitra adiny 5 akory raha efa navalin'izy ireo ilay kaonty. Araka ny Google, ny kaontinay dia nampiseho loza teo amin'ny AdWords .. tsara, Fuck you Google !!
Raha misy mahalala fanompoana hafa toa azy AdSense, izay miasa marina ary matotra, azafady mba lazao aminay amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra na manorata aminay kzkggaara [at] avy amin'ny linux [dot] net o elav [at] desdelinux [dot] net.
Ny soso-kevitra rehetra momba ny serivisy an'ity karazana ity dia horaisina tsara.
1 Momba ny Fanomezana
2 Ohatrinona ny vola ilaintsika?
3 Fananganana vahoaka
Momba ny Fanomezana
Ny mpiara-miasa amiko dia efa nanazava ny antony tsy nangatahanay fanomezana mivantana, na izany aza, ny olona sasany dia efa nandefa ny fanampiana ara-bola izay ankafizinay indrindra.
Mba hanomezana anao hevitra hoe ohatrinona ny vola azonay noho ny fanampianao dia nasiako bara miendrika Wikipedia amin'ny sisin-tany izay milaza fa tokony ho tratra izany ary ohatrinona ny fisaorana anay noho ireo fanomezana nataonao.
Ohatrinona ny vola ilaintsika?
Ny sasany nanontany hoe ohatrinona ny vola tena ilainay. Eny, hazavaiko aminao ny fomba ampiasana ny vola FromLinux amin'izao fotoana izao. Noho izany, ary alohan'ny hanomezana antsipiriany ireo serivisy dia manasa anao aho hahita ny vidin'ny mpanome anay: GNUTransfer.
Mampiasa ny drafitra izahay izao:
Xen 2048 ($ 29.92 / Volana, $ 354.04 / Taona, na totalin'ny $ 300 noho ny fihenam-bidy isan-taona.)
Xen 3072 ($ 44.95 / Volana, $ 539.28 / Taona, na totalin'ny $ 450 noho ny fihenam-bidy isan-taona.)
Raha atao teny hafa, ho an'ireo mpizara roa dia handoa $ 750 isan-taona izahay. Milaza aho fa handoa izahay satria raha ny marina, tamin'ny fifanarahana teo amin'ny tetikasanay sy GNUTransferManana fihenam-bidy manokana izahay, ka ny tarehimarika farany dia $ 300 isan-taona. Ary mbola manan-kery io fifanarahana io.
Manararaotra manome torohevitra aho GNUTransfer noho ny fanohanan'izy ireo sy ny maha-matihanina azy ireo
Ao amin'ny Xen 3072 VPS (ny lehibe indrindra ary misy tombony lehibe indrindra) azontsika antoka fa ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny Blog, izay serivisy manana fifamoivoizana sy fanjifana avo indrindra. amin'ny Xen 2048 VPS, manana ny sisa amin'ny serivisy (Forum, Paste, FTP, Webmail ... sns) izahay.
Ny mpampiasa sasany dia nanoro hevitra anay hampiasa tranonkala toa Indiegogo y Kickstarter mamorona fampielezan-kevitra Fananganana vahoaka ary jereo raha amin'ity fomba ity no ahafahantsika mahatratra ilay tarehimarika narosontsika ho azo.
Tena manombatombana tokoa izahay, fa tsy ny vola ilainay ihany no tratrarina, fa ny hanomboka tetikasa hafa heverinay fa tena mahaliana toa azy ireo, tranokala ho an'ny mpamorona ary angamba fitaovana hafa ho an'ny finday.
Ary ity namana malala ity dia momba ny Donations daholo. Misaotra betsaka anao rehetra, ary raha te-handray anjara ara-bola ianao dia afaka manoratra aminay amin'ny mailaka napetrako etsy ambony. Raha ankoatr'izay dia irian'izy ireo fa rehefa tratra ny totaliny dia avoakanay ny anarany (na anaram-bosotra) sy ny vola natolotr'izy ireo ho fankasitrahana noho ny fanampiana, dia faritan'izy ireo amin'ny mailaka nomen'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Avy amin'ny Linux » Fanomezana sy fidiram-bola ao amin'ny DesdeLinux. Manolotra angona misimisy kokoa izahay
Azon'izy ireo atao ny mangataka vola hanaovana salady ovy ao Kickstarter, miaraka amina filaharana izy ireo ary ampy ho an'ny mac aza ary mandao an'i linux: troll
Oh! Hevitra tsara izany. Ity no fomba hanarahantsika ny dian'i Torvalds sy hividianana Macbook 😀
Mauricio Baeza dia hoy izy:
300.00 $ isan-taona ho an'ireo VPS roa? Inona no fihenam-bidy tsara, midika izany fa ny GNUTransfer, na tian'izy ireo na tsia, dia mametraka ampahany betsaka amin'ity tetikasa ity ... Mahagaga ve raha eo amin'ny fiarahamonina dia tsy afaka mandoa 300 isan-taona isika? ... Manana traikefa kely aho amin'ny ny fahasarotana hahazoana loharano, amin'ny alàlan'ny tetikasa, izay heveriko fa mendrika ...
Halako am-pahatsorana ny dokam-barotra, aleoko mandoa fa tsy manana izany. Tsotra tokoa ka hanome dolara vitsivitsy isam-bolana maharitra.
Misoratra anarana amin'ny 10 dolara isam-bolana aho, saingy, ho fanoloran-tena, ireo izay misoratra anarana (mety ho iray dolara fa tsy voafetra, hehe), saingy tokony ho matotra sy isam-bolana izany, raha tsy misy ny renivola miasa. Iza no misoratra anarana?
Valiny tamin'i Mauricio Baeza
Misaotra betsaka anao Mauricio tamin'ny fandraisana andraikitra sy ny hevitra nataonao. Eny eny, GNUTransfer dia manome fanohanana mahatalanjona, miasa tsara ry zalahy ary kilasy voalohany ny fanohanana.
Eny, efa nanamarina izany aho rehefa nanadihady ny vidin'ny fampiantranoana ary manome azy tsiro, ary ny marina dia mahatalanjona amin'ny fitsaboana sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa izy ireo.
Eny, ny tadiaviko dia ny fampielezana tranonkala roa amin'ireo mpanoratra tsara indrindra amin'ny herintaona malalaka an'ny GNUTransfer VPS mba hampiroboroboana ny serivisy, satria tsy dia malaza toa ny HostGator na A2 Hosting (tena tsara, fa indraindray. in rehefa avy any careros izy ireo).
Na izany aza, ho faly kokoa amin'ny serivisy GNUTransfer aho, saingy indrisy fa fohy ny Ca $ h ary zara raha misy an'io fampiantranoana nozaraina izay itazizako ny tranokalako hijoro miaraka amin'i GoDaddy sy ireo tapakila fihenam-bidy notsoahina hanavao ny sehatra, noho izany miaraka amin'ny VPS GNUTransfer dia hanome ahy ny fotoana hifindra ny tranokalako WordPress any Drupal ao anaty jiffy.
Miaraka amin'ny bokotra fanomezana PayPal dia azonao atao izany, amin'ny fotoana fanomezana ny fanomezana dia manontany ny bokotra iray raha te hamerina azy ho azy ianao isam-bolana. Efa nilaza tamin'i Gaara momba an'io izy, mbola ho hita eo izay tapaka.
Hmm. Tsy nilaza izany momba izany i Sandy. Andao hojerentsika izay ataontsika.
Eny, tsara. Amin'izay dia hoy aho hoe: TONGAVA ARY Alaivo ny VOLA !!! Saingy satria tsy misy bokotra hanomezana fotoana fohy, dia tsy maintsy mandefa hafatra ao anaty tavoahangy any amin'i KZKG sy Gaara aho mba handray ny tolotra omeko.
Salama, andramo ity fitaovana hitako an-tserasera ity http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/sign-up?mkt=en-us Raha tsy mety aminao io dia tsy manana hevitra tokana aho.
Tsikaritro fa ity serivisy Microsoft ity dia tsara raha avy tany Microsoft ihany (nifanatrika tamin'ny AdSense) izy io, saingy noho ny fampifangaroana ny Yahoo Ads, dia mametraka dokambarotra izay mandefa anao any amin'ny pejin'ny fisolokiana, malware ary ny banga.
Noho izany, TSIA.
Manana hevitra ve ianao hoe firy ny fanehoan-kevitra momba ny fankahalàna no tsy maintsy nofafako hatramin'ny omaly alina ka hatramin'izao?
Mba hampazava tsara azy, tompokolahy, sorohy ny fisotroana ratsy amin'ny fanehoan-kevitra toa izany ary avy eo manipy tantrums satria voafafa izy ireo na tsy mandeha amin'ny antonony ny hevitra.
Eny ry zalahy, efa nanoratra taminareo roa aho mba hifandray ary hanampy anao amin'izany tetikasa izany. Miandry valiny aho vao afaka manome zavatra.
Toyerd24 dia hoy izy:
Raha ny fahitako azy dia mety hanampy be ny crowdfounding, satria ny ankamaroan'ny olona dia manohana tetikasa rindrambaiko maimaim-poana miaraka amin'ny fanomezana izay mihoatra ny tanjona napetraka indraindray; manome ohatra ny Ubuntu Edge of Canonical, arahaba avy any Mexico.
Mamaly an'i Toyerd24
Rodrigo Satch dia hoy izy:
Heveriko fa raha ny tsirairay amin'ireo olona 586 namaky ity lahatsoratra ity dia nanome dolara 1 dia ho ampy ny kapital ho an'ity sy ny tetikasa maro kokoa eo amin'ny fiarahamonina hahaha
fa hey, vonona ny handray anjara aho, lazao amiko ny kaonty PayPal izay handefasako ilay fanomezana sa ahoana no anaovanao ny vola?
Ary raha manana antsipiriany bebe kokoa momba ny antony fanakatonana ny kaonty adwords anao ianao, azoko atao ny mifanakalo hevitra amin'ny fifandraisana, angamba afaka manao zavatra isika
Mamaly an'i Rodrigo Satch
"Ary raha manana antsipiriany bebe kokoa ianao momba ny antony nanakatonana ny kaonty adwords anao, azoko atao ny mifanakalo hevitra momba izany amin'ny fifandraisana, angamba afaka manao zavatra isika"
Hentitra tokoa ny politika Google Adsense, raha mahita tsindry sandoka izy ireo (olona mahita segondra vitsy monja ary manidy ny varavarankely, izay mampiseho fa tsy liana tamin'ny doka mihitsy izy ireo) na tsindry be loatra momba ilay isan'ny doka izay "vita pirinty" (nandinika tsara izy ireo hatramin'ny nanombohan'izy ireo dokambarotra nandritra ny taona maro), satria nofoanan'izy ireo ny kaontinao ... ary tsy afaka mangataka na inona na inona ianao, satria manan-kery hanao izany izy ireo nefa tsy manome fanazavana anao. Mazava fa tsy maintsy mijery ny tombontsoan'ny mpanao dokam-barotra ianao, ary izy ireo no mandoa vola amin'ny farany.
Marina ve izany sa ianao na ianao tsy mahalala ny tena antony nahatonga azy ireo nampiato ny Adsense? Na dia amin'ny lafiny iray aza dia takatra hatramin'ny taona vitsivitsy lasa izay tamin'ny alàlan'ny resaka nifanaovako fa matetika aho no nihaona tamin'ny minita (na bandy mody zazavavy) izay nilaza taminao toy ny "Raha mankany amin'ny unblogpedorro.blogspot.com ianao ary tsindrio ity rohy ity dia homeko anao ny mailako / afaka mahita ahy mitanjaka amin'ny cam ianao" satria ireo rohy ireo dia avy amin'ny Adsense (mbola misy iray hafa izay manao izany, fa mandehana manazava aminy fa mahita tsindry diso i Google).
Etsy ankilany, ny politika Adsense sasany dia tsy mitombina (indrindra ireo kabary momba ny zon'ny mpamorona), saingy heveriko fa tsara kokoa ny nanakatonan'izy ireo ny kaonty ankehitriny fa tsy tao anatin'ny taona vitsivitsy satria rehefa mandeha ny fotoana dia lasa vadin'izy ireo ianao ka tonga amin'ny farany. sivana / fanesorana ireo hevitra, lahatsoratra ary na dia bilaogy iray manontolo aza fotsiny ho an'ny fitifirana lehibe ao amin'ny Google handinihana ny hamaha ny kaonty Adsense anao.
Raha mitady fomba hafa izy ireo dia afaka manomboka eto fa tsy fiantohana na inona na inona izany satria mbola sarotra be ny mandresy an'i Google amin'ny sahaniny manokana.
Gustavo17 dia hoy izy:
Manana hevitra aho: makà fantsona YouTube ao amin'ny bilaogy, izay mazava ho azy fa misy ifandraisany amin'ny bilaogy (toro-hevitra, fampianarana, sns) no apetraka. Misy fantsona toa manintona be, ary amin'izany ao anatin'ny 1 taona, mety ho mihoatra ny tratra ny tanjona 300 dolara. fiarahabana
Valiny ho an'i Gustavo17
Ny Youtube dia "mifamatotra" amin'ny google adsense, izay tsy mendrika azy ireo intsony ...
Safidy iray hafa ny famoronana boky fampianarana sy fivarotana azy ireo amin'ny tranomboky virtoaly, ohatra: http://www.lulu.com
Manana boky torolàlana miisa 3 aho:
Ny olana amin'izany dia mitaky asa be (fanomanana sy fanovana ireo boky torolàlana) ary fampiasam-bola maharitra izany, tsy ny fahazoana vola avy hatrany ...
vitodumas dia hoy izy:
Mba miangavy re…
Hitako fa ambany noho ianao ny mandoa anao, ary mihoatra lavitra noho ny omeko amin'ny fandoavana betsaka kokoa no azonao.
Azafady, azonao atao ve ny manondro ny tranokalan'ireo olona manolotra an'ity serivisy ity (VPS Xen ...)?
Mahazoa fiarahabana mafana.
Mamaly an'i vitodumas
Azo antoka fa lehilahy !! Na izany na tsy izany, tao amin'ny paositra no rohy: GNUTransfer
Izany rohy izany dia toa famindram-bola tamiko ary hitako fa nampifandraisiko tamin'ny baikonao io.
Tena sariaka. Misaotra betsaka anao amin'ny tendrony.
Afaka nanandrana ny PayU sy DineroMail ihany koa izy ireo. Raha manokatra kaonty izy ireo dia afaka mahazo vola amin'ny vola eo an-toerana ary tsy misy carte de crédit, avy amin'ny firenena amerikana latina isan-karazany, dia misy aza ny "portal solidarity" ho an'i Arzantina. Azon'izy ireo atao ny manandrana ny vintan'izy ireo, raha avelany hiditra ho orinasa tsy mitady tombom-barotra.